COVID-19 – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
Mask တပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူတို့ သိလိုကြသည့် အမေးအဖြေများ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း Q. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်တချို့မှာ Mask မတပ်မနေရ Mask Campaign လုပ်နေကြပါပြီ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့အမြင်လေး သိပါရစေ။ A. Mask Campaign လုပ်မှာကို သဘောတူပါတယ်။ တွေ့ဆုံမယ့်...
COVID-19 ပိုးကင်းစင်သွားသူ လူနာအမှတ် (၉) ၏ ရောဂါကျော်လွှားပုံအကြောင်း
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-9) သည် အသက် (၄၄) နှစ်အရွယ် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့ တွင် ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မြဝတီမြို့မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်သို့...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) COVID-19 ရောဂါကြောင့် အသက်ရှူစက်လိုအပ်တဲ့ လူနာစာရင်းကို အချိုးချကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်များသူ ဒါမှမဟုတ် အဝလွန်သူတွေက ပိုများနေတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုလိုက်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နီးပါးရရှိတဲ့ COVID-19 သတင်းတွေအရ လေ့လာသူတွေဟာ ဒီရောဂါအသစ်အကြောင်း လေ့လာမှုအမျိုးမျိုး လုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါရှိသူတွေထဲမှာ...
COVID-19 ကင်းဝေးဖို့ သင့်မျက်ဝန်းတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပါ . . .
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) COVID-19ကာကွယ်ရာမှာ မျက်စိတွေကိုလည်း မမေ့ထားသင့်ပါဘူး။ COVID-19 က ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါဖြစ်တာကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့နှံ့မှု ထိန်းချုပ်ရာမှာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာနေတာက အရေးပါတဲ့ ကာကွယ်နည်းပါ။ လက်ကိုမကြာခဏဆေးကြောခြင်း၊ နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်အုပ်ထားခြင်း၊ လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေအပြင် မျက်စိကိုလည်း မဆေးကြောရသေးတဲ့ လက်နဲ့မထိတွေ့မိဖို့လည်း...
COVID-19 ရောဂါနှင့် အနံ့မရ၊ အရသာမသိခြင်း
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု Case တချို့မှာ အနံ့မရ၊ အရသာမသိခြင်းဆိုတဲ့ လက္ခဏာကလည်း ပါဝင်လာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်ပရိသတ်တို့အတွက် COVID-19 ရောဂါနှင့် အနံ့မရ၊ အရသာမသိခြင်း...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အခုရက်ပိုင်း ညအိပ်မပျော်ကြသူတွေ အမြောက်အများပင်။ ထိုအထဲမှာ နှင်းနုသွေးလည်း အပါအဝင်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရင်တုန်ပြီး အလိုလို ပူပင်နေသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကြောက်စိတ်တွေ လျှံတက်လာတတ်သည်။ ချွေးများပင်ပြန်လို့ ခုတင်ပေါ်ကထပြီး အဝတ်အစားလဲရတဲ့ညတွေတောင် ရှိဖူးသည်။ ဦးတင့်ထူးကတော့တစ်မျိုး။ အရင်ကဖြစ်ဖူးသော အစာအိမ်ဝေဒနာ...
Q. သွေးချိုဆီးချိုရှိတဲ့လူကြီးတွေ ညဘက်မအိပ်တာ သွေးချိုမြင့်နေတာနဲ့ ဆိုင်လားရှင့်။ A. သွေးချိုမြင့်ရင် ဖြစ်တဲ့အထဲမှာ ညအိပ်မပျော်တာကတော့ မပါပါဘူး။ ညအိပ်မပျော်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ တစ်ခုကတော့ အိပ်ချိန်နာရီ (Sleep Rhythm)နဲ့ ဆိုင်တာရယ်၊ နောက်တစ်ခုက စိုးရိမ်ပူပင်သောက (Anxiety) များတာ၊...
ပြတင်းပေါက်များ ဖွင့်ထားခြင်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပြန့်ပွားမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ဟုဆို
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နေအိမ်များအပါအဝင် အဆောက်အဦတို့ရှိ ပြတင်းပေါက်များကို ဖွင့်ထားခြင်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ဖွယ်ရာရှိကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့ ယုံကြည်ထားကြသည်။ အော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်နှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ ကျန်းမာရေးနှင့် ပိုးမွှားဗေဒဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကို COVID-19 ဖြစ်စေသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အပါအဝင် ပိုးမွှားများကို လက်တလောလေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအရ...